Umntwana uZhanna Friske ngo-Apreli wayeneminyaka emithathu ubudala. Ngeli xesha, abalandeli beemvumi abazange bahlale bebona imifanekiso yomntwana. Uyise kaPlato uDmitry Shepelev ungumntu ongaqhelekanga kwiintanethi, kwaye umculi wezilwanyana akayi kubona le nkwenkwe inyanga ezininzi.
Uvuyo lwabalandeli bakaJeanne Friske, udadewabo washicilela imifanekiso emithathu yomntakwabo kuphela kwiWebhu izolo.
Ngaphezulu, u-Natalia Friske wabeka iphepha lakhe kwiklip video encinane ngePlato. Le yividiyo yokuqala kunye nenkwenkwe efike kwi-intanethi. Kwividiyo "Unina Natasha" kunye noPlaton Shepelev benza ubuso.
Iifoto ezintsha kwi-Instagram ka-Natalia Friske zenziwe ixesha elidlulileyo
Abo balandela ngokutsha iindaba zakutshanje ezinxulumene nentsapho kaZhanna Friske, bayazi ukuba umculi wasekuhlaleni uye wazama ukufumana iintlanganiso kunye noPlato, kodwa uyise wengane akafuni ukunika inkwenkwe kubazali nomkhulu.
Emva kokubona kwiintetho zeNotalia Friske ze-Instagram ezitsha zePlaton Shepelev, ababhalisi beodade babenomdla, banomnqweno wokuba intlanganiso ekulindelwe ixesha elide le nkwenkwe yayisenzeka. Uvuyo lwabalandeli lwaluthatha ixesha elifutshane: UNataliya wachaza ukuba wafaka kwi-microblogging zakhe zezithombe zangaphambili zentsana. Udade uJeanne akasenalo ithuba lokubona le nkwenkwana:
Ndikhumbula iixesha xa ufunda iincwadi, ulala nokupheka isobho sakho kuwe ...
I-Eurovision-2017: kutheni kuvinjelwe ukungena kweYulia Samoilova, ukugqitywa kwetyala leSBU
Ngaba iinkqubo ze-nitrogen ezisebenzayo ziyasebenza?
Izitya zokutya kunye nezidlo zaselwandle
Iipokotshi nge jam
Iimveliso ezinonophelo zokunyusa izinwele